Sida ugu fiican ee dusha hadda ee iPad-ka mahadsanid Logitech | Wararka IPhone
Waa inaan qiraa taas Marwalba waxaa iisoo jiidan jiray dusha Microsoft: kumbuyuutarka oo aan ku qori karno dhibaatooyin la'aan, u qaadashada qalab aan u isticmaali karno inaan ku qabanno waxyaabo badan oo aan xaddidneyn, taageerada gadaal si aan ugu dhigno meesha ugu raaxada badan annaga, tilmaame ... Inkastoo ay tahay run in haddii aan ka hadalno wax badan, nooca cusub ee iOS 9 ayaa noo oggolaan doona inaan ku qabanno dhibaato la'aan, ugu yaraan moodooyinka ugu casrisan, qaybaha intiisa kale ee aan jeclahay xilligan ma suurtagelin ugu yaraan Apple.
Laakiin mahadsanidiin Logitech, waxaan ku qaban karnaa dacwadda cusub ee hadda la soo bandhigay, Logitech Block, oo aan ku ku dar kiiboodh (oo ay ku lifaaqan yihiin birlabta qalabka) iyo kiis difaac ah oo taagan si aan qalabkeena ugu dhigno sida ugu habboon ee aan u baahan nahay. Sidoo kale haddii aan ku xirno dejinta, hoos u dhigista iPad-ka dhanka kumbuyuutarka, waxaan heleynaa qalab aad ugu eg midka Microsoft Surface 3 tablet / laptop.
Tayada ragga ee Logitech labadaba si loo naqshadeeyo kiisaska loona abuuro teebabka waxaan u maleynayaa shaki kuma jiro. Kiiboodhkii ugu dambeeyay ee aan ka tijaabiyo shirkadda wuxuu ahaa Key-to-go, adkaysi u leh dareerayaasha, kumbuyuutar aad u fiican cabbirka, taabashada, safarka muhiimka ah, ergonomiska ... wax aan caadeysanay.
Laakiin horeyba u iibso kumbuyuutarka iPad-ka, waxa ugu talo iyo raaxo badan waa dabool leh kumbuyuutar taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan abuurno qaab fudud oo lagu qaado. Labada midow ee qalabka aaladda waxay ku daboolayaan kumbuyuutarka iyo xiritaanka ku biirista labada aalad, waxaa fuliya magnets, oo noo xaqiijinaya nabadgelyo ku filan si aanan uga baqin in la furo inta aan daabulayno.
Xaga dambe ee Logitech Block waxaan dhigi karnaa 20 ilaa 70 digriiiyadoo aan loo eegin in kumbuyuutarka uu ku xiran yahay qalabka iyo in kale. Difaaca kiisku wuxuu ka ilaaliyaa qalabkeena dhibcaha shilalka. Sida ku dhaceysa teebabka ugu dambeeyay ee sidoo kale lagu soo bandhigay IFA-da magaalada Berlin, soo saarayaashu waxay doorteen inay ku daraan baytariyada aan dib loo soo celin karin. Xaaladdan oo kale kumbuyuutarradu waa ku shaqeeya laba baytar oo nooca CR2032 ah Ma xaqiijinayaan sanad nolol batari aan dhib lahayn.
Sida kumbuyuutarrada ugu badan ee loogu talagalay iPad, safka kore waxaan ka helnaa inta badan dariiqooyinka loo maro sida caadiga loo gooyo macruufka, sida Siri, muusig loo ciyaaro, shaqooyin badan, badhanka qufulka ... naqshad dhaqameed ay weheliyaan jilayaal caadi ah oo lagu soo bandhigay cabir wanaagsan. Ku saabsan kumbuyuutarka, maadaama ay ku dhacaan inta badan moodooyinka soo saaraha, waxay noo ogolaaneysaa inaan qoro qoraalo dhaadheer annaga oo aan raaxo lahayn ama curves waxbarasho dheer si uu ula qabsado cabbirka kiiboodhka iyo furayaasha.
Kiiboodhka Logitech Block wuxuu hadda kaliya la jaan qaadi karaa iPad Air 2Waxay culeyskeedu yahay 645 garaam, dhererkeeduna waa 251,5 mm, dhererkiisuna yahay 184,5 mm, ballaciisuna waa 22 mm. Xidhiidhka waxaa loo sameeyaa sida caadiga ah bluetooth, waa wax laga cafiyo dareerayaasha haddii shilku ku daato shil wuxuuna leeyahay kumbuyuutarrada loo yaqaan 'LEDs' si ay u muujiyaan hawlgalkooda. Block Logitech waxaa lagu qiimeeyaa $ 129.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Sida ugu fiican ee dusha sare ee hadda kujira iPad-ka mahadnaqa Logitech